एक सफल कलाकारको मुख्य सम्पत्ती भनेको नै अवार्ड हो : नायक नवराज श्रेष्ठ - Setoparewa Setoparewa
असार ११ गते २०७४
“एकदिनको कुरा हो एकजना सिनियर दाईले मलाई सोध्नुभयो नवराज तिमी हिरो बन्ने हो रु?मैले भने, दाई ! म हिरो बन्नको लागि त हजुरको पछि लागेको नि घुमाउरो जवाफपछि उहाँले मलाई भन्नुभयो ‘त्यसोभए मेरो खातामा २ लाख डिपोजिट गरिदिनु’ म अवाक् भएँ, हिरो भएर त पैसा कमाउँछ पो भन्थे उल्टो पैसा तिरेर म किन हिरो बन्नुपर्ने रुत्यो कुराले मेरो मनमा च्वास्स घोच्यो,कताकता स्वाभिमानमा ठेस लाग्न पुगेजस्तो भयो, कलाकारिता प्रति नै एक किसिमको नेगेटिभ छाप पैदा भयो । त्यहि ईगोले गर्दाखेरि मैले फिल्म लाईनलाई चटक्कै छोडेर पढाईको सिलसिलामा अमेरिका छिरें ।” – सिने नायक नवराज श्रेष्ठ
यी लगायत उहाँले ‘गुडलक’ र ‘स्काउट’ जस्ता फिल्महरुमा एउटा सफल नायकको भूमिका निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । व्यापारको साथसाथै उहाँ समाजसेवामा पनि कृयाशिल हुनुहुन्छ । World friendship and peace campion को संस्थापक अध्यक्ष,American Nepalese Association को सदस्य ,,Rocky Mountain Friends Nepal नेपाली घर,एन आरएनए युएसएको लाईफ मेम्बर, ग्लोवल नेपाली फिल्म अवार्डको संस्थापक अध्यक्ष एवं अमेरिका नेपाल टेलिभिजन जस्ता दर्जनौ संघ संस्थामा आवद्ध रहेर काम गरिरहनुभएका श्री श्रेष्ठ आफ्नो ससुराLion past district governor स्वर्गिय राम बहादुर श्रेष्ठ र Helping Hands Health Education Internationalको संस्थापक अध्यक्ष काका ससुरा नारायण श्रेष्ठको प्रेरणाबाट समाजसेवामा लागेको बताउनुहुन्छ ।
यसका साथै सामाजिक काममा अघि बढ्न उहाँकी श्रीमती दिना श्रेष्ठको पनि ठूलो देन रहेको छ । श्रीमती दिना श्रेष्ठ र छोरा नदिर श्रेष्ठको साथमा उहाँ अमेरिकाको कोलोराडो डेनभरमा बस्नुहुन्छ । Helping Hands Health Education International नामक संस्थाको सहयोगमा उहाँले आफू जन्मेको जन्मस्थल सिन्धुलीको माटोमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिशेष योगदान गर्ने उद्देश्यले सन् २०११ को सेप्टेम्वर र जुन महिनामा अमेरिका,क्यानाडा र ईङ्गल्याण्डबाट डाक्टरहरु झिकाई आफ्नो गृहजिल्लामा ८ दिने बृहत स्वास्थ्य शिविर चलाउनुभएको थियो । जसको प्रतिनिधित्व Helping Hands Health Education International ले गरेको थियो । जसमा ७००० देखि ८००० जना स्थानिय बिरामीहरु लाभान्वित भएका थिए ।
1. नवराज जी ! सर्बप्रथम त दस्तावेज डट कमको तर्फबाट तपाईँलाई हार्दिक नमस्कार ! ग्लोवल नेपाली फिल्म अवार्डको पत्रकार सम्मेलन हालसालै सम्पन्न भईसकेको छ । तपाईँले सन् २०१६ मा उक्त कार्यक्रमको संयोजकको रुपमा रहेर कामपनि गर्नुभयो । सिजन २ को कार्यक्रमपनि अमेरिकामा नै हुन गईरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । अहिलेपनि अमेरिकामा नै कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्देश्य के हो रु एक संस्थापक अध्यक्षको हैसियतले बताईदिनुहुन्छ कि ?
२० तपाईँले ग्लोवल नेपाली फिल्म अवार्ड नामक संस्थाको थालनी गर्नुभयो । ग्लोवल नेपाली फिल्म अवार्ड भनेको नेपाली कलाकारिता क्षेत्रको निकै संबेदनशिल बिधा हो जसमा तपाईँहरुले हात हाल्नुभएको छ । एक दुई बर्ष अवार्ड बितरण गरेर मात्र नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रमा उल्लेखनिय कार्य गरेको भन्न मिल्दैन । त्यसको लागि दिर्घकालिन योजना र रणनीति हुन जरुरी छ तसर्थ यसलाई जीवन्त बनाउनको लागि के कस्तो ढंगबाट अगाडि बढिरहनुभएको छ रु यसका भावी योजनाहरु के के छन् र?
हामीले यस ग्लोवल नेपाली फिल्म अवार्डलाई जीवन्त बनाउनको लागि थुप्रै योजनाहरु बनाएका छौं । यस कार्यक्रमलाई संसारभर चिनाउनको लागि नै ग्लोवल नेपाली फिल्म अवार्ड संस्थाको स्थापना गरिएको हो । जस अनुसार प्रत्येक बर्ष फरक फरक देशमा कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपाली डायस्पोरालाई संसारभर चिनाउने यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । यसको साथै फरक फरक बिधामा अवार्डको छनौट गरेका छौं । सन् २०१६ मा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा पूरानो कलाकारहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा अवार्ड बितरण गरिएको थियो । यसबर्ष अवार्डको विधालाई फराकिलो बनाउंदै २० वटा विधामा अवार्ड थपेका छौं ।
अघिल्लो बर्ष पुरष्कृत हुनुभएका कलाकारहरुलाई केहि मात्र छनौट गरी नयाँ कलाकारहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने ध्येयले यसबर्ष नयाँ कलाकारहरुलाई अवार्डमा छनौट गरिएको छ । कार्यक्रमको नाम नै ग्लोवल भएकोले नेपाली भाषा संस्कृतीको जगेर्ना गर्ने संसारभर छरिएर रहेका नेपाली भाषी कलाकारहरुलाई पनि छनौटमा पारेका छौं । त्यस मध्येमा नेपाली भाषी भुटानी नागरिकले पनि नेपाली कलाकारिताको बिकासमा उल्लेखनिय भूमिका निर्वाह गरेको कुरालाई नकार्न सकिंदैन । तसर्थ उनिहरुलाई पनि नेपाली कला क्षेत्रमा अझ अगाडि ल्याउन भुटानी नायक नायिकाहरुलाई पनि अवार्डमा छनौट गरिएको छ । अमेरिकामा रहेका नेपाली कलाकारहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी यसबर्ष नेपाली डायस्पोरा बिधामा २ वटा बिधाबाट थपेर ५ वटा बिधामा अवार्ड बितरण गर्ने योजना बनाएका छौं । यसबाट पनि हाम्रो योजना अत्यन्त फराकिलो र बैज्ञानिक भएको प्रमाणित हुन्छ । साथै हाम्रो यो अभियान जीवन्त बन्नेमा कुनै शंका छैन ।
३०अवार्ड भनेको कलाकारको कलालाई सम्मान गरेर दिईने एक प्रकारको उपाधी हो । अवार्ड भनेको चानचुन मान्छेले पाउने कुरा होईन । नेपाली कला क्षेत्रमा उत्कृष्ट अभिनय गरे बापत पाउने कुरा हो तसर्थ एउटा कलाकारको जीवनमा अवार्डले के कस्तो भूमिका खेलेको हुन्छ रु
४०बिदेशको ठाउँमा नेपाली फिल्म अवार्ड गर्न कत्तिको कठिन छ रु अमेरिकाजस्तो ठाउँमा अवार्ड गर्न कसरी आँट गर्नुभयो रु अघिल्लो बर्ष ग्लोवल नेपाली फिल्म अवार्ड कार्यक्रमको संयोजकको रुपमा रहेर पनि काम गर्नुभएको थियो । आफूले संयोजन गर्दाको अनुभव बताईदिनहोस् न ?
– अमेरिकामा अवार्ड कार्यक्रम गर्न साच्चिकै कठिन हुँदो रहेछ दीपशिखा जी १ वास्तवमा मैले यो अवार्ड कार्यक्रम गर्नलाई धेरै पहिलेदखि नै सोचिरहेको थिएँ । शुरुमा फिल्म फेस्टिबल कार्यक्रम गर्ने बिचार थियो तर समयको अभावले सकिरहेको थिईन । यसैबिच मेरो आदरणिय गुरु कृष्ण मल्ल,उहाँ र मैले धेरै बर्षदेखि बिभिन्न संघ संस्थाहरुमा काम गर्दै आइरहेका थियौं । मेरो आयोजनमा नेपालमा धेरै अवार्ड कार्यक्रम पनि गरेका थियौं । कलाकारिता मेरो रुचीको बिषय भएको र म यस क्षेत्रमा पुनः प्रवेश गरेकोले ले परदेशमा बसेर नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नै उल्लेखनिय योगदान गर्ने उत्सुकता पलायो ।
५० प्रसंग बदलौं,तपाईँ एउटा सफल व्यवसायीको रुपमा पनि स्थापित भइसकेको मान्छे, आफ्नो व्यवसायका वावजुद नेपाली सिने क्षेत्रमा पनि प्रवेश गरिसक्नुभएको छ साथै एक कुशल नायकको भूमिका पनि निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । नेपाली कलाकारिताको क्षेत्रमा लाग्न तपाईँलाई कसले उत्प्रेरित गर्यो ?
बच्चैदेखि मलाई कला क्षेत्रमा बिशेष रुचि थियो । बिध्यालय जीवनदेखि नै म नाच्ने,गाउने,बजाउने साथै नाटकमा भाग लिने गर्थें । एसएलसी उत्तिर्ण गरेर जब म मेरो गाउँ सिन्धुलीबाट पढाईको सिलसिलामा काठमाण्डौं आएँ त्यसपछि म अभिनयको खोजिमा हिँडे ।